Cidibtirka Mahbarka Oo Meel Fiican Maraya, 23 Nin Oo Dhebayaco Ah Oo Aaga Galgala Iyo Gaalkayo Looga laayey – Codka Qaranka Tanadland
"Gunta Habar-majeerteen Mindhaa Gawda Kama Deyno". By: Saxardiid
Cidibtirka Mahbarka Oo Meel Fiican Maraya, 23 Nin Oo Dhebayaco Ah Oo Aaga Galgala Iyo Gaalkayo Looga laayey Iyo Idaacaddii Mahbarka Oo Beesha (Muumin Aadan) Ay Mar Kale Gubeen.
Sida xakhiikhada ah beesha dhebayaco xoogaaga yarkaa oo agoonta ah ee ka degan gobalka mudug dad isdifaacikara maaha, tol u hiiliya oo difaacikarana ma’ay laha. Taas waxaa u daliil ah agoonta Dhebayacada ee degan gobalka mudug waxaa lagu hayey xasuuq aan kala’go lahayn tan iyo sanadkii 1998. Agoonta mahbarka beesha xasuuqda maaha niman isqariya ee waa niman aan jaaha la saarikarin oo lagu dhiciwaayey. Gobalaweynta beesha (Muumin Adaan) dhebayacada ay gobalka mudug ku laysay waxay maraysaa hada tiradoodu 258 nin. Dagaalkii labada maalmood maaliintii uu qarxay oo ay taariikdu ay (01/09/2011) iyo intii u dhexaysey sanadkii 1998, Dadka dhebayacada ah oo magaalada gaalkacyo lagu laayey kuligood intaan la layn ayaa taleefan loogugu digey inay ku jiraan liiska qaarajinta. Lana layndoono sidii ragii ka horeeyey oo ay siku beesha ahaayeen. Sababta beesha (MA) ay ugu digeyso beesha ay xasuuqa ku hayso waxa weeye in aan cid kale lagu tuhmin raga ay bareerada u laayaan.
Reer Tanadland dhaqan uma ay laha lagumana yaqaan inay fal ay geysteen ay ka beensheegaan. Beesha (MA) waa beel balaaran. (Xassan Muumin) waa 39 lafood, (Cali Muumin) waa 22 lafood, (Xirsi Muumin) waa 16 lafood, (Maxamed Muumin) waa 9 lafood. Waana niman fooladeyg ku caanbaxay oo maaha niman fooda la gelinkaro. Ciday isqabtaana cayro iyo jab baa weligoodba isu raaca. Laakiin marka dadka loodigey ay beesha MA layso beeshoodu waxay raga laga laayey ay ku eedeynjireen beesha Sacad. Waxayna beesha dhebayaco ay marmarsiinyahaas u samaynayeen cabsi ay ka baqayaan inay dagaal la galaan beesha MA.
Waa hore waxaa dhicijirtey in marka agoonta mahbarka nin ama labo loogadilo magaalada gaalkacyo inay weerar soo qaadaan, oo markaas inta 12 nin oo kale laga dilo la cayrsado. Oo iyagoon hal nin oo keliya aan dhaawac u geysan, firxad koodu markay xaafadda agoonta galaan laysaga haro. Markii xoogaaga agoonta ah ee degan galbeedka xaafadda Israac ay firgix-firgixdii ka dhamaatay, oo ay eedeen ayey waxay goosteen inaysan marka la laayo aysan weerar qaadin. Sidaas ayuuna ku bilowday xasuuqa halka beel ku socda oo an weerar-celiska lahayn. Xasuuqaas oo hada 17 sano jirsadey welina ku socda gunta Habar-majeerteen ee taagta daran.
Cabsida agoonta mahbarku la hulaabnaayeen mudada dheer waxay ka duushay oo ay isyiraahdeen “allaylehe maanatay ayaad aarsanaysaan”, subaxdii ay taariikhdu ahayd (01/09/2011) oo ay isyiraahdeen “hartaa idiinyimid oo rag idinka dhicinahaya”. Ogow dagaalkii labada maalmood wuxuu ku biloday 18 kii nin oo u beergeel watey ee ay beesha (MA) subixii hore dishey. Shirkii garoowe ka dhacay oo ay beesha Dhebayaco ku shirtay, agoontu waxay ku qiratay waxay sanooyinka badan ay qarinjireen. Waxay shirkaas ku shaaciyeen waxay mudo dheer ay ku dhicila’aayeen inay afka soo mariyaan. Ga’aankii beesha dhebayaco ay shirkaas ku gaarteyna wuxuu ahaa in beelaha reer Tanadland ee reer (Ugaas Cismaan) iyo (Maalismoge) la weeraro. Dhebayaco iyo midiidinkoodiiba markii dagaalkii labadda maalmood sida xun loogu jebiyey. Oo maxaysatada mahbarka iyo midiidinkooda laga diley 123 nin. Beesha dhebayaco dagaalkaas waa ay ku riiqantay waxaana looga diley 57 nin.
Dagaaalkii Labada maalmood Kedib:
Dagaalkii labada maalmood ka hor beesha MA hawshoodu waxay ahayd xasuuqa agoonta mahbarka, Agoonta mahbarkana shaqadoodu waxay ahayd xabaaloqufid iyo inay baqtigooda aastaan. Dagaalkii labada maalmood kedib maadaama mahbarka la quusiyey oo laga adkaaday. Agoonta mahbarku waxay halkeedii ay ka siiwateen hawlahoodii ay ku caanbexeen. Sida xabaalo qodida, aasida dadka laga laayo, iyo inay beesha xasuuqa ku haysa beel aan ahayn iyo Alshabaab ay xasuuqa laguhayo ku eedeeyaan.
Dulucda Qormadda :-
Sidaan marar badan aan horay u sheegay beelaha reer (Ugaas Cismaan) waxaa modo dheer ka go’nayd, inay si bareero ah dhegta dhiiga ugu daraan cid alla iyo cida ay u arkaan inay la shaqayso ama ay taageerto burcad-badeeda beesha Dhebayaco. Weriye kusheega ay afkiisa ka soobaxdo buun-buuninta mooryaanta mahbarka ha ogaado inuu xagayaga dilsuge ka yahay. Goor ay noqotabana mar aanu tooganeyno oo madixiisa dhulka laga gurayo isagoo cad-cad ah.
Taariikdu markii ay ahayd (21/12/2014) waxaa xaafadda agoonta lagu gubey gaari ay la socdaan niman dhebayaco ah. Weerarkaas waxaa ku dhaawacmay labo nin oo Dhebayaco ah. Nimanka gaariga lagu gubey raga ku dhaawacmay waxaa ka mid ah nin la yiraahdo (Farxaan Cali Xaad). Waxaana weerar kaas lagu diley wiil u dhalay (Farxaan Cali Xaad). Ninka la yiraahdo (Farxaan Cali Xaad) oo ah nin qaxooti ah oo aan u dhalan gobalka Mudug ayaa waxaa miinadu ay gubtey qaarka danbe oo dhan. Waxaana la filayaa in uu ku biiro dhebayacada futada ku xamaarta ee ay beesha (Muumin Aadan) curyaamisey.
Taariikhdu markii ay ahayd (31/12/2014) waxaa la gubey idaacad ay mahbarku leeyihiin, oo magaalada Gaalkacyo looga yaqaan idaacadda “Baroorta iyo Calaacalka”. Idaacadda la gubey ayaa waxay in mudaaba ay ahayd idaacad hawlgab laga dhigay oo horey loo curyaamiyey. Kedib markii xayn dhebayaco ah oo idaacadda u shaqeeya dhegta dhiiga loo daray, kuwo badanna laga curyaamiyey. Weerar kaas waxaa lagu curyaamiyey oo labada lugood looga gooyey ninka la yiraahdo (Maxamuud Cabdi Axmed). Waxaana dhaawac kaas ka daran loo geystey washeysi (Cabdulaahi Maxamuud Aadan) oo uu qaraxu bur-buriyey shafka, galowda iyo garbaha.
Taariikhdu markay ahayd (02/01/2015) waxaa la weeraray baska macalimiinta keenyaatiga ah ee iskoolka (H/Dh Bardecad) loogu adeego, Ujeedada weerarku maysan ahayn in ardayda dhigata iskoolka H/Dh Bardecad mustaqbalkooda wax loo dhimo. Mana ahayn in macalimiinta keenyaatiga ah la wax yeeleeyo. Laakiin ujeedadu waxay ahayd in ninka mahbarka ah ee darawalka ka ah baska iyo ilaalada la socota dhegta dhiiga loo daro. Weerar kaas qasaaro xun baa beesha dhebayaco ka soo gaarey. Baska macalimiinta markii la gubey qofkii ugu horeeyey oo ay naftu ka haado wuxuu ahaa darawalkii gaariga. Xayn dhebayaco ah iyo adoontii kalana si fiican baa hilibkooda loo waray oo gaariga loogu dhex gubey. Maalintaas mahbarka waxaa laga diley nin waxaana laga dhaawacay 5 nin.
Triikhdu markii ay ahayd (16/01/2015) ayaa mar kale la gubey idaacadda mudada dheer hawlgabka ahayd ee afka mahbarka ku hadasha. Weerar kaan danbe ujeedadiisu waxay ahayd in qalabka idaacaddu ay ku shaqayso iyo dhismaha idaacadda la bur-buriyo. Maadaama weerarkii hore oo ay ujeedadiisu ahayd in shaqaalaha idaacadda lagu waxyeeleeyo lagu guuleystey. Mideeda kale, weerarkii ugu danbeeyey ee lagu gubey idaacadda afka mahbarka ku hadasha ee magaalada gaalkacyo. Wuxuu ahaa debaaldeg iyo xus loogu dabaaldegayey, sanadguuradii ka soo wareegtey gubitaankii ugu horeeyey ee idaacadda mahbarka lagu gubey. Markii ugu horeysey ee idaacadda mahbarka la gubo waxay ahayd habeenkii ay taariikhdu ahayd (16/01/2010). Makaas oo idaacadda mahbarka goor fiid ah lagu gubey labo bambaano oo gudah looguridey dhismaha idaacadda.
Beelaha reer (Ugaas Cismaan) oo hada ka daaley ugaarsiga iyo laynta hal-halaysiga ah ee mahbarka, ayaa hada waxay go’aansadeen in beesha dhebayaco weerar culus oo qaflad ah lagu qaado. Dad badan ayaa waxay aaminsanyihiin in rai’iisalwasaarah cusub iyo beeshiisa lagu weeraro garoonka magaalada gaalkacyo, Oo ay sugaan mar uu ina gaas ku soo dhaweynayo garoonka magaalada Gaalkacyo. Dadaka figraddaas qaba waxay aaminsanyihiin in uu ina gaas yahay nin fuley ah, oo an isku aaminikarin hubka beeshu haysato oo dhan hadii ay tolkiis yiraahdaan adaan kugu ilaalinaynaa. Dadka figraddaan qaba ayaa waxay kaloo aaminsanyihiin, In weerarkaasi uu yahay fursadda ugu wanaagsan oo dhebayaco sahal loogaga furankaro tigniko badan rag badan oo boqolaal ahna hal qaflad ah looga laynkaro.
Dad kale oo aan yarayn ayaa waxay aaminsanyihiin in qofladda ugu habooni ay tahay jidka Garoowe iyo gaalkacyo u dhexeeya oo la geeyo ciidan xoog leh. Marka laga war helo in ina gaas iyo ilaaladiisu ay ku soo fool leeyihiin, dabeedna ciidankaas la xasuuqo oo hubka laga furto. Markaas kedibna ay ciidamada beelaha reer (Ugaas Cismaaan) ay iskala qaybiyaan. Oo qaybi ay ku biiraan ciidamada kale ee reer Tanadland oo ku sugan magaalada garoowe. Si ay u sahlanaato in mudo gaaban looga taqaluso mahbarka degan xaafadda (Horseed) ee magaalada Garoowe. Qaybta kalena ay israaciyaan xoogaaga agoonta ah ee ay birtu ka dheregtey oo mudo gaaban ay uga falaxashaan.
Docda kale, waxaad moodaa in nimankii Warsangeli ahaa ay waanadaydii iyo wixii aan guubaabinayey ay wax ku qaateen. Wararka ka imaanaya waqooyiga gobolka Bari waxay sheegayaan, in aaga Galgal uu ka dhacay dagaal si xun loogu jebiyey beesha Dhebayaco. Dagaalka aaga Galgala ka dhacay ayaa la sheegay in uu yahay duulaankii ugu cuslaa oo ay qaadaan xaq’udirirka beesha Warsangeli. Dagaalka dhexmaray beelaha Warsangeli iyo Dhebayaco oo socdey mudo sadex maalmood ah, ayaa wuxuu ku bilowday maalintii ugu horeysey duulaan gaadmo ah oo beesha dhebayaco 4 nin logaga diley, gaarigii ay la socdeena lagu gubey. Intaas waxaa xigey dagaal ku dhufo oo ka dhaqaaq ah oo beesha dhebayaco looga diley 13 nin oo kale. Qasaaraha ka soo gaarey beesha Dhebayaco dagaalka aaga Galgala, ayaa hada wuxuu marayaa 19 dhimasho ah iyo 31 dhaawac ah. Mujaahidiinta xaq’udirirka ah ee beesha Warsangelina waxaa dhankooda la sheegay inay ka shihiideen 12 mujaahid. Jabbka loogeystey beesha Dhebayo wuxuu kalifay inay dhilooyinka beesha Dhebayaco, oo ay ugu horayso qabxadda la yiraahdo (Hodan Ciise) inay idaacadaha ka yiraahdaan “raga beeshayada ee ka dagaalamaya aaga Galgala ayaanu lacag u uruurinaynaa”.
“Gunta Habar-majeerteen Mindhaa Gawda Kama Deyno”. By: Saxardiid
Docda Kale, sidaad ogtihiin beesha Dhebayaco maleeshiyo beeleedkii ay geeyeen tuulada Saaxo ayaa weli tuulada dhexdeeda difaac uga jira. Waxaana halkaas ka raacay ceeb iyo jab foolxun. Maleeshiyada beesha Dhebayaco ee halkaas ku godoonsan ayaa waxay sababeen inay shacabkii tuulada deganaa ay qixiyaan oo colaad geliyey. Waxaana weli ku hareeraysan geesiyiinta beesha sacad oo Dhebayaco uga bartay inay hubka sahal uga furtaan, tan iyo intii ay ku dhigeen xasuuqii “Baaroweyne”. Maleeshiyada beesha majeerteen ayaa waxa intii dhawr todobaad ah ay ku dhici la yihiin inay nimanka ku hareeraysan oo kaabiga ku haya ay xagooda xabad u ridaan. Bal iskadaa inay tuulada colaada looga qaxay ee saaxo ay ciidanka ku hareeraysan ka kiciyaane. Si kastaba ha ahaatee beesha Dhebayaco oo ah niman aad u nugul oo marnaba uusan talagalkoodu ahayn inay dagaal galaan, ayaa dadka oo dhami waxay hada jeedaalinayaan siday futadooda ugala baxaan debinka ay la galeen ilayn dhebayaco xabad ridi ay maysee. Dagaal inay gasho oo ay xoog wax ku raadiso maadaama aan laga filahayn.
“Gunta Habar-majeerteen Mindhaa Gawda Kama Deyno”.
Halkani Waa Codka Wadaniga Xalaasha Ah Ee Umadda Karaamaysan Ee Qaranka Tanadland, By: Saxardiid Xareed Bulxan.